UGEORGE R.R MARTIN UZA KUYIKHUPHA NINI IMIDLALO YEZIHLALO ZOBUKHOSI IMIMOYA YENCWADI YASEBUSIKA, ZITHINI IINGCAMANGO ZABALANDELI? - IZINTO EZIKHETHEKILEYO ZE-GS
UGeorge R R Martin ebeyingqondo emva kweMidlalo yeZihlalo zobukhosi, Ingoma ye-Ice noMlilo uthotho lwencwadi.
UGeorge R R Martin ibiyingqondo emva komdlalo weZihlalo zobukhosi, Ingoma ye-Ice noMlilo uthotho lwencwadi. Ngelixa bekukho iincwadi ezintlanu ukuza kuthi ga ngoku apho eyokugqibela iphume khona yayingumDaniso ngeDragons. Kodwa abalandeli bakaR R Martin sele bonwabile ngencwadi yesithandathu neyesixhenxe ye Uthotho lweqhwa kunye noMlilo eziza kuba yimimoya yobusika. Ke, ngaba siyayifumana incwadi elandelayo yoluhlu kungekudala, Imimoya Yasebusika?
Ewe, nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga nemimoya ebusika kunye nezinye izinto ezinokwenzeka zenzeke.
Uthini umhla wokukhutshwa kwemimoya ebusika?
Sele kuyiminyaka engaphezu kwesibhozo ikhutshiwe incwadi yokugqibela kaGeorge. Ebesoloko ebhala Imimoya Yasebusika ishumi leminyaka ngoku phakathi kokuqhambuka kwesibetho oko uGeroge R R Martin wakuthumela kwaye wazisa bonke abalandeli bakhe ukuba unyukele kwi Winds Yasebusika, kodwa ngelishwa ukugqitywa kwayo akukapheli. UGeorge ukwathe akanako ukusinika owona mhla wokukhutshwa kuba ebetsala nzima nokubhala uqobo. Kubonakala ngathi ebehamba nencwadi kakuhle. Ke sidinga ukubona ukuba ngaba imimoya ebusika iyakhupha na ebusika kulo nyaka okanye hayi.
Umxholo webali leMimoya yasebusika
Nangona kunganomdla ukwazi ukuba yintoni ezayo kwincwadi elandelayo yeNgoma yoMkhenkce kunye noMlilo (Iimoya zasebusika) kodwa okubuhlungu kukuba oko kusongelwe kodwa into esiyaziyo kukuba iLady Stoneheart iza kungena incwadi ezayo njengoko iqinisekisiwe nguR R Martin ngokwakhe.
Zithini iingcamango zabalandeli malunga nemimoya yobusika?
Ngokulindela okukhulu ukuhanjiswa kwe Imimoya Yasebusika , uninzi lwabalandeli lufikelele kwinqanaba apho baziva ukuba le ncwadi ayizukuphuma nanini na. Kodwa kukho nabanye abalandeli phaya abonwabileyo nje ngokulinda.
Abalandeli balindele ukuba njengencwadi yesithathu neyesihlanu yeNgoma yoMkhenkce kunye noMlilo eyayiyisiqhwithi samakrele kunye noMdaniso ngeDragons ngokwahlukeneyo sinokuba nemimoya ebusika nayo yahlulwe yangamacandelo amabini. Nangona kunjalo, ayikaqinisekiswa, kuxhomekeke kubude bebali Imimoya Yasebusika .
Imimoya yoBusika iza kuza kungekudala, iincwadi zangaphambili zazintle. Uchungechunge lukaMartin loMlilo kunye ne-Ice lunesiseko sabalandeli esahlukileyo.
Ukufunyanwa kwamaGqwirha Ixesha lesi-2 Yintoni omele uyazi? Yonke into malunga noThotho oluzayo kunye neNqwelomoya, kunye noHlaziyo lwamva nje
Abaguquki 7: I-Era ye-Unicorn, iiDecepticons ezintsha kunye neerobhothi zeCast (2021) uHlaziyo lwamva nje
Abagcini beGlass 3 Trailer, iNew Villain, Amathuba, ulindelo olunomdla kunye namathuba amangalisayo
I-Deadpool 3 Yonke iProjekthi, eNtsha [i-CAST], iNdawo enomdla, amathuba, i-villain, yonke inkcukacha eyodwa omele uyazi
UJack Ryan Ixesha lesi-3 Kwenzeka ntoni kuGqirha Cathey Mueller? Iitreyila, uMhla wokuKhutshwa kweXesha eliNokwenzeka, okuMva nje [UHLAZIYO], Iindaba ezizayo Ofanele Uzazi
Ukuhamba kwexesha elifileyo 5 kuya kuba nini kwi-netflix
elona xesha lilungileyo leengqondo
Ixesha lekakegurui 3 2020
aquaman 2 umhla wokukhutshwa
Isikolo esiphakamileyo se-dxd ixesha lesi-5